10 codsiyo Android ah oo loogu talagalay carruurta inay ku raaxaystaan ​​oo wax ku bartaan | Androidsis
PiliHuertas | | Codsiyada Android, Ciyaaraha Android
Marka xigta waxaan rabaa inaan kaaga tago liiska 10 barnaamijyada android ee loogu talagalay carruurta inay ku raaxaystaan ​​oo ay bartaan, mawduuc si dhif ah looga hadlay adduunka Android laakiin sidoo kale waxay u qalmaan booskooda. Markan waxay ku saabsan tahay barnaamijyada lagu barto Ingiriisiga iyo waxyaabo kale oo yar. Waqti fiican la qaad carruurta!
1. ABC-yada, wuxuu leeyahay kaararka tooska ah ee lagu barto alifbeetada oo isu geeyo dhawaaqa iyo sawirrada.
2. Alphabet Lite carruurta , waxay la mid tahay tii hore, laakiin adigoo gujinaya sawirka waxaad maqli doontaa dhawaqa ku habboon. Nooca qoraalka ayaa kuu oggolaanaya inaad isticmaasho dhammaan howlaha muddo xaddidan maalintii.
3. Tirooyinka iyo xisaabta carruurta, waxay ka caawisaa barashada lambarrada iyo xisaabta aasaasiga ah. Lambaradu waxay ku qoran yihiin luqado kala duwan, sidoo kale Isbaanish. Waxay baran doonaan waxa weyn iyo kayar, isugeynta iyo kalagoynta.
4. Midabada, Si loo barto midabada inta lagu jiro baashaalka, waxaa lagula talinayaa carruurta jirta 18 bilood iyo wixii ka weyn.
5. Qaabab, si aad u barato qaabab qaar, oo ah 2 iyo 3 cabbir. Carruurtu way taaban karaan sawirka oo maqli karaan magiciisa, hore uma ahan goor hore inay wax bartaan.
6. Halxiraalaha Qaabka Carruurta, xujo xiiso leh si loo hagaajiyo xirfadaha mootooyinka carruurta. Ku biir dhammaan qaybaha ka kooban xayawaanka wayna muuqan doontaa
7. Erayada aragtida ah, loogu talagalay carruurta bilaabaya inay wax ku akhriyaan iyadoo la kala soocayo xarfaha waaweyn iyo kuwa yaryar.
8. Carruurtu waxay isku xiraan dhibcaha, waa inaad ku xiraa dhibcaha si cayiman si loo helo sawir. Waxay ku habboon tahay carruurta aan iskuulka gaarin
9. Ciyaarta Caruurta: Memory Mania, ciyaarta xusuusta caadiga ah ee ay tahay inaad ku ogaato isla kaararka (xayawaanka, qaababka, tirooyinka, midabada, iwm); ku jira qaabab kala duwan (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, iwm).
10. Rinjiga caruurta fartiisa [waa lagu qiimeeyaa € 0,72], waa ciyaar madadaalo leh oo aad farahaaga wax ku sawireyso.
Ciyaarahaan waxaa laga heli karaa cusbooneysiinta mustaqbalka si ay ugu awoodaan inay si sax ah ugu shaqeeyaan kiniiniyada, taasoo ka dhigeysa iibsashada mid ka mid ah aaladahaan xitaa kuwo soo jiidasho leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 10 barnaamijyada Android ee loogu talagalay carruurta inay ku raaxaystaan ​​oo wax ku bartaan
Maxay tahay sababta wararkii ugu dambeeyay aan loogu daabicin dusha sare ee shabakadda sidii ay ahayd illaa iyo hadda?
Waxaan u maleynayaa in midka koowaad la dhigo (midka ka socda sheybaarka Android Andalusian) wuxuu u baahan yahay xoogaa muhiimad dheeri ah wuxuuna la mid yahay "go'an" si erayga mowduuca u faafo 😉
Haddii kale, waana ku qaldan yahay Antonio inuu i saxo ja
Tani waa @Fran, aan aragno haddii aan wax yar siino dhacdada halkaan koofurta cidina uma imaan inay taleefan ka jeediso ama inay shirar ama wax siiso, wax la qabtay waa inaad ruxdo 🙂
Fikrad weyn, markaa.
@jag isha waxay ku taal dhamaadka boostada oo sida Anna kuu sheegto, waxay ku qortaa labada baloog. Intaas waxaa sii dheer, codsiyada ma ahan kuwa loogu talagalay carruurta laba-luqadlaha ah, waxaan haystaa laba gabdhood oo yar-yar oo ay jeclaayeen badankood, dhammaantoodna maahan, waxaanan kuu xaqiijinayaa inay kaliya yaqaanaan Ingiriisiga ay dugsiga ku bartaan. Waxay kaloo ka caawineysaa inay xusuustaan ​​oo ay bartaan ereyada qaarkood ee Ingiriisiga ah sida midabada, xarfaha iyo kuwa kale. Dhamaan wanaag
Anna iyo antocara,
Marka hore, waxaan ka cudurdaaranayaa faallooyinka la xiriira isha. Xaqiiqdii waa dhamaadka qoraalka oo aanan horay u arag.
Marka ay timaado "laba luuqadlaha," wixii aan rabay in aan iraahdo, waana ka xumahay haddii aan khalad ka dhigo, taasi waa carruurta yaryar, waxaan jeclaan lahaa inaan arko barnaamijyo u dhigma oo Isbaanish ah.
Waxaan haystaa wiil 3 jir ah, wuuna jecelyahay codsiyada sida "xusuusta ilmaha", "Paint pro" ama "Hadalka ...", laakiin maadaama aan ku bilaabayo xarfo iyo lambarro, iskuxirka codka iyo sawirada ingiriisiga ma aha waxa ugu fudud.
Ma dhahayo sanad gudihiis ma jeclaan doontid, laakiin sidaan horay u iri, ma ogi horumarro la mid ah kuwa Isbaanishka, kuwaas oo ah tixraacyada aan door bidi lahaa boggan.
Waxaan soo iibsaday kiniin waana iga dhamaaday, caruurtaydu kama joojinayaan inay u qaataan inay ciyaaraan "waa kuma?"
Waa inaan iibsadaa mid kale. 🙂
Waxaan ku soo lifaaqayaa xiriirka:
Dhawaan, waan ka degay
Waa xujo carruurta laga bilaabo 1 sano. Waa wax lagu farxo!
Ujawaab Carmen Pilar Martínez Sánchez
Wiilkaygu wuu jecel yahay barnaamijyada cajiibka ah (waxay leeyihiin 2 ama 3). Waxay ku jiraan dukaanka ciyaarta.
Tusaale ahaan tan in lala midoobo. Waxaad haysataa saddex ikhtiyaar «feker xisaabeed» «aragti aragtiyeed» iyo «isugeyn fikrad»….
Gabadhaydu waxay jeceshahay sanduuqa muusikada ee nambarada Babyplay
Adigana adigaan kuu daayey
Hagaag, caruurtaydu waxay ku raaxaystaan ​​sheekooyin taxane ah oo is dhexgal ah oo lagu daabaco magaca riwaayadaha. Waxay hayaan codsi ah maktabad iyaga u gaar ah oo aad ka soo dejisan karto ama ka iibsan karto sheekooyinka: (Waa kuwan laba sheeko oo bilaash ah oo Isbaanish ah)
In kasta oo muddooyinkan dambe aan helay koonto isbarbar socota oo sheekooyin bilaash ah lagu soo rogayo (hadda af Ingiriis): http://goo.gl/fm0jJ
Waxaan rajeynayaa inay kuu adeegi doonaan.
Iyaguna Spanish ayey ku jiraan !! Aad bay u fiican yihiin, aad baad u mahadsan tahay!
Waxaan kaliya arkay sheekada Barafka Cad iyo Toddoba Caanood oo la soo geliyay: 3
Waan jeclahay !! Halkaan waxaad kuheleysaa xiriiriye ^ ___ ^
Waxaan hayaa taleefankayga gacanta oo waxaan ahay 8 jir, waan jeclahay, waa motorola samsung, way fiicantahay, waxay leedahay ciyaaro, waxay ahayd aabahay laakiin aniga ayaa isiiyay aabbahayna wuxuu ku iibsaday samsung internet wai fai iyo wuxuu isula qabsadaa farteyda Markii aan ahaa qiyaastii 4 sano jir, waxaan aqaanay sida loo maareeyo kumbuyuutarka, taleefanka gacantu way adagtahay in la qabto waana wax walba markii aan 4 sano jiray.
Ku jawaab yuliana
Hello Juli ii qor si aan wax kaaga weydiiyo qolkaas, ok dannycardona89@gmail.com igu dar weji
Jawaab si aad u riixdid
Ma shaqeeyaan, lamana soo dejiyo
Waad salaaman tahay, waxaan kuu daayay xiriiriye App-ka waxbarasho ee Bilaashka ah ee aan kala soo degay Telefoonkeyga iyo Tablet PC-ga, oo ay caruurteyda aad u jeclaayeen, marka laga reebo xaqiiqda ah inay ku baashaalaan midabaynta sawirada iyo caqabadaha, waxay bartaan waxyaabo badan inta ay ciyaarayaan maxaa yeelay waxay leedahay waxqabad la taaban karo. Codsiga waxaa loo yaqaan «Baro Midabaynta». Waxaan iskaga tagayaa isku xidhka si aad u aragtaan:
Salaan kadib, waxaan rajaynayaa inay kuu shaqayso
Waxaan ku dari lahaa tan:
Wiilkaygu wuu baashaalay oo wax buu la bartay.
Carruurtaydu ma joojiyaan. Ma garanayo waxa barnaamijkani leeyahay, laakiin waxay leeyihiin waqti fiican.
Ku jawaab Oli
Waxaan kugula talinayaa «Baro Midabaynta» carruurta waa wax fiican !!!!
Codsigan oo kuu oggolaanaya inaad isticmaasho kamaradda kiniinka si aad u hesho kartoon ka dibna u rinjiso.
Ciyaartan caruusadaha waraaqaha ah, waxay ku dayanayaan folios-ka caruusadaha aan ku ciyaarnay markii aan yarayn. Sidoo kale, ugu deeqo dhammaan faa'iidooyinkaaga sadaqo.
Waxaan ku darayaa arjigaan aadka u xiisaha badan iyo waxbarashada ee caruurta, xitaa kuwa yar yar (way midabeyn karaan oo wax ku sawiri karaan si dabiici ah sidii iyagoo ku sameynaya warqad, iyagoo adeegsanaya qalin qalin leh iyo midabyo)
«Buugga midabaynta - Kartoonnada Bilaashka ah»
Barnaamij kale oo waxbarasho waa:
«Ku Baro Midabaynta»
Labaduba aad ayey ufiicanyihiin, waanan kula talinayaa !!!
Jawaab Valentina Bozzone
Aad baad ugu mahadsantahay talooyinka! Waxaan sidoo kale kula talinayaa mid ka mid ah kaararka tooska ah ee Isbaanishka loogu talagalay carruurta dugsiga barbaarinta: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.game.childrencards.esp
Tani waa ciyaarta ugu fiican Android ee carruurta,
Ku jawaab info
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan u baahanahay dhowr ka mid ah barnaamijyadan, maxaa yeelay waxaan haystaa cunug autistic ah, waxaanan u baahanahay inaan ku dhaqan celiyo, iyadoo la adeegsanayo barnaamijyadan si uu wax u barto, laakiin ma haysto fursad aan awood ugu yeesho inaan kala soo dego mid ka mid ah barnaamijyadan ciyaarta. google, haddii ay suurta gal tahay waxaan kaa rabaa inaad u dirto emaylkayga yamcky@gmail.com
Waad salaaman tihiin Yankiel
Jawaab Yan Yanel Montes
Rasmi ah Android 2.2 Rom for Htc Magic / MyTouch 3G la heli karo
Deji codsiyada asaasiga ah ee hagaajin doona waxqabadkaaga Android